Isigqi sesimanje sokuphila siyasiza wonke umuntu amathuba amaningi okulimala. Ukusheshisa ukusebenza ekuseni, nasekhaya kusihlwa, lo makhelwane we-metropolis ngezinye izikhathi akaqapheli imvelo nhlobo. Isimo sengqondo sokunganaki ekukhiqizeni akusizi ngalutho. Futhi zingaki izimo ezivela ekuphileni kwansuku zonke! Imidlalo iphinde imangaze kumuntu ongakabala amandla akhe. Yebo, angifuni ngisho nokuthinta izimo zobugebengu.
Kuzo zonke izimo, umphumela, njengombuso, ungenye - ukulimala kobuchopho obuhlungu. Kulokhu, into esemqoka ukukwazi ukubona kahle izimpawu zokuncintisana kubantu abadala nokunikeza usizo olufanele ngesikhathi esifanele. Kubalulekile ukuthi izinyathelo ezithathwe azilimazi isiguli.
Emzimbeni womuntu, lesi sitho sigxila emanzini. Ivikela ubuchopho ekuqhumeni ngokumelene nethambo le-skull. Kodwa, ngeshwa, ngokushaqeka okuqinile noma ukulimala indlela enjalo yokuvikela ayanele. Ngenxa yalokho, ukulimala kwenzeka. Kulokhu, zonke izimpawu zokuncintisana kubantu abadala ziyabonakala.
Lo mkhuba uphazamisa umsebenzi womzimba. Awuholeli ezinkambisweni ezingenakuguqulwa. Okungavamile ngesikhathi sokuncintisana, amathambo ekhanda, izicubu ezithambile, izitsha noma amagobolondo awonakele.
Izici zesigaba ngasinye ezenzeka ebuchosheni, futhi nanamuhla, odokotela banamuhla abachazwa. Noma kunjalo, odokotela abaningi bathi lesi simo siholela ekuphazamiseni impilo evamile yamangqamuzana omzimba. Phela, ngokuncintisana kobuchopho, ukudla kwabo kwehla, izingxenye zezicubu ziyashintsha, ukuxhumana phakathi kwezikhungo kulahlekile. Ngenxa yalokho, kunezinhlungu ezincane, izibhamu ezincane, ukuvuvukala. Ngeshwa, ngisho ne-MRI ayibonisi izinguquko ezinjalo.
Noma yimuphi umonakalo ekhanda ekuqaleni uhlukaniswe waba ovulekile futhi uvaliwe. Uma uqala ukulimala, izicubu ezithambile namathambo we-skull ziyathinteka. Ukulimala okuvaliwe kuyingozi kakhulu. Kodwa-ke, ayidinga ukunakwa okuncane. Kanti, zihlukaniswe zibe yincintiswano elula nokucindezela, ukucindezela.
Ukulimala okukhulu kuyingozi kakhulu. Ngemuva kokuncintisana okunzima kutholakala ukuthi kunomonakalo omkhulu ezindaweni ezithile noma ukuhlukana kwamagciwane. Lesi simo ngokuvamile siholela ekulahlekelweni kolwazi. Isikhathi lapho isiguli sasikulesi simo esingenhla, sinquma izinga lobukhulu. I-Coma yisigaba esibi kakhulu. Isiguli, lapho ekhumbula, ngokuvamile akhumbuli abanye futhi akaqondi ukuthi kwenzekani kuye.
Amagremu adonsela phansi
Ezokwelapha, kukhona ukuhlukaniswa kwalesi senzakalo, okuhlongozwa odokotela baseColorado futhi bamamukela emhlabeni jikelele. Ngokusho kwakhe, ama-degree angama-concussion ahlukene. Ngamunye wabo uveza ngokuqondile ukunqotshwa kwesitho esibalulekile.
Ngakho, i-gradation eyamukelekile:
1 degree . Lesi sigaba siyinkinga elula. Izimpawu ezichaza isimo sesiguli ukuhlukumeza ukuhambisana, ukudideka kokuqonda. Ukulahlekelwa yilezi zinsuku akuzona zonke izici zesigaba sokuqala. I-Amnesia nayo ayitholakali ezigulini.
2 degree . Leli fomu libhekisela ekulimaleni okukhulu. Kule degree, ukuphazamiseka kuphawulwe , ngokuvamile ngaphandle kokulahlekelwa yiyo. Nokho, uphawu oluyinhloko ukubonakaliswa kwe-amnesia.
3 degree . Isigaba esinzima kakhulu sokulimala. Isibonakaliso esibonakalayo salesi sigaba ukulahlekelwa ukwazi.
Isikhathi sesikhathi sokuhlukaniswa siboniswa kunalokho sikhohlise. "Igebe elincane" lombuso ongazi lutho lingashintsha kusukela emasekhondi ambalwa kuya emashumi amaminithi, ngokusho odokotela basekhaya. Lesi sibonakaliso sibhekwa ngokubambisana nezinye izimpawu eziveza ukucubungula kobuchopho. Isilinganiso sokuqineka sinqunywa kuphela isithombe esiphezulu sesimo sesiguli. Zonke izimfanelo zicatshangelwa.
Kubaluleke kakhulu ukuthi kutholakale kahle izimpawu zokuncintisana kubantu abadala ngesikhathi esifanele. Phela, umuntu olimele udinga ukunakekelwa kwezokwelapha.
Kufanele kuqondwe ukuthi izimpawu ezilandelayo zokuncintisana kubantu abadala ngeke zivele ngokushesha hhayi zonke. Futhi ezinye izibonakaliso (kuxhomeke ebukhulu bokulimala) futhi aziveli.
Izimpawu ezivelele kakhulu yizi:
Izinwele. Lesi sibonakaliso sisobala, ngoba isisulu salimala.
Ukuziphatha okungasebenzi noma ukugubha okukhulu.
Ukuhluleka ekuxhumaniseni ukunyakaza. Uphawu lubonisa ngokuqondile ukulimala kobuchopho. Njengomthetho, isizungu sixhunywe kulesi senzakalo.
Memeza ezindlebeni. Isibonakaliso esibangelwa ukuphulwa kwegazi ekunikezeni ubuchopho.
Ukulahlekelwa kokwazi. Lesi yisimpawu esiyinhloko esibonisa ingxabano ebuchosheni. Njengoba kushiwo ngaphambili, isikhathi sokuvala singase sihluke.
Ubukhulu bezingane. Kunconywa ukuyihlola. Ngezinye izikhathi nge-concussion, abafundi bangazuza ngesimo esihlukile.
Ukudumala. Isibonakaliso esibonisa ngokucacile inkinga.
Ukuthukuthela kumsindo aphezulu nokukhanya okukhulu. Ngemva kokuthola ulwazi, isiguli singase sibhekane nokukhathazeka okukhulu emithonjeni enamandla okukhulunywe ngenhla.
Ukudideka kokwazi. Phakathi nengxoxo, ungabhekana neqiniso lokuthi isiguli asikhumbuli ngisho nalokho okwenzekile kuye.
Sekuyisikhathi eside isiguli sinenhloko. Kungenziwa ukuhambisana nezinkinga ezihlukahlukene zokuzimela. Lokhu kungase kube ukuntuleka kwesifiso, ukushaya kwenhliziyo, ukucindezela, noma ubuthakathaka. Ukungahambisani nokuziphatha kungumlingisi weziguli. Ihlukahluka kokunganaki okukhulu ukucasula okukhulu.
Ngokuvamile umbuzo uvela - yini izinga lokushisa elinengxabano? Phela, akushiwo ohlwini lwezimpawu ezisemqoka. Futhi lokhu akulona ngengozi. Ngempela, njengoba umthetho, izinga lokushisa ekhanda elibhekene nekhanda lihlala lingaphansi kwemingcele evamile. Ngakho-ke, kaningi akugxila kukho konke, uma sisho ingxabano.
Izimpawu kanye nokwelapha isikhathi saso isikhathi eside ngamasonto amabili. Ekupheleni kwalesi sikhathi, isiguli siyasizwa kakhulu. Nakuba singeke sikwazi ukukhipha isikhawu sesikhathi eside.
Izinyathelo ezivinjelwe ekusizeni
Ngokusho kwezibalo zezokwelapha, ingxabano iyisifo esiyingozi esivamile. Ngenxa yalokho, cishe wonke umuntu angabhekana nesimo esinjalo. Futhi ukuthi uzosiza kanjani isiguli ngempumelelo, ukubikezelwa okunye kuncike. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi impilo yesiguli ixhomeke kulokhu.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlala ezindabeni ezingavumelekile neze ukucubungula kobuchopho. Ngemuva kwalokho, ngeke nje basize umuntu, kodwa kubiza isimo sesisulu.
Insizakalo ekhanda ivinjelwe ngokuyinhloko ukuhamba ngokuqinile.
Ngaphambi kokuhlola udokotela, ungahambisani nesisulu.
Akudingeki ukuthi uphuze noma ukondle isiguli.
Kuvinjelwe ngokuqinile ukusebenzisa imithi.
Abalimele kufanele bahlolwe yi-neuropathologist. Nguye kuphela ongenza ukuxilongwa ngesisekelo somtholampilo.
Izimpawu ezisemqoka ngemuva kokulimala yizi: izinwele ezikhungweni ezihlukahlukene kanye nezilinganiso ezihlukahlukene zokuqina, ukulahlekelwa ulwazi. Ngenxa yesibonakaliso semitholampilo, udokotela uzokwazi ukuphetha ngokuthi isiguli sinomncintiswano omkhulu noma obala. Izimpawu ngezinye izikhathi zingase zifihliwe yisiguli ngokwakhe. Kulesi simo, ukuxilongwa kuphela kuzobonisa isithombe sangempela.
Usizo lokuqala uma kwenzeka ukuxubha kusho ukuhlinzekwa kokuphumula okuphelele kwesiguli. Isisulu kufanele sibeke. Kudingekile ukuxubha izinkinobho kanye nezibopho ezembatho. Lokhu kuqinisekisa ukukhubazeka okuvamile kwe-airway. Inhloko yesisulu kufanele iphendulwe ngakunye. Ngezinye izikhathi kuyadingeka ukwelula ulimi. Ayikho imithi okufanele inikezwe kwabalimele.
Uma isiguli sikhala ngesidlova, umsindo ezindlebeni, khona-ke kufanele ulandwe. Uma kukhona ukusola kokulimala kwentamo, kubalulekile ukulungisa ukungahambi kahle kwalezi zinsuku ngezindlela ezingalungile. Njengotshani ungasebenzisa izingubo, ugxilise ngokuqinile ku-roller. Ifakwa ngaphansi kwentanyeni nekhanda.
Qinisekisa ukubiza "i-ambulensi". Umuntu olimele akakwazi ukuthuthwa yedwa. Ukulethwa kwesiguli ngabachwepheshe kuyingozi kakhulu. Uma kungenakwenzeka ukubiza ithimba losizo, ukuhamba kufanele kwenziwe ngokuqapha okukhulu. Isiguli kumele sibe kuphela endaweni yokulala. Isihlalo sangemuva semoto sifaneleka kakhulu kulezi zinhloso.
Uma kwenzeka ukulahlekelwa ukwazi, isisulu singasiswa ekhaleni nge-ammonia. Kulesi simo, akuvumelekile ukugubha isiguli, ukubopha ebusweni.
Umuntu angakhononda mayelana nokwanda kwezimpawu - ukwanda kwekhanda, ukuvela kwesicanucanu, ukuhlanza. Kukhona ukuwohloka okuqhubekayo kwesimo. Usizo lokuqala lokuncintisana kuleli cala ukulethwa okusheshayo kwesisulu esikhungweni sezokwelapha. Lezi zimpawu zingabonisa ukubola kwesisu. Ngeshwa, kule nkinga ukwelashwa okunamandla akunamandla. Ukuhlinzwa kuphela nge-neurosurgical kuzosiza lapha.
Ngokuvamile lo mbuzo awubangeli ubunzima ku-neurologist. Ukuze ukuxilongwa kuwanele ukuhlola isiguli kanye na-anamnesis. Noma kunjalo, ukuhlolwa kusekunconywa. Lokhu kukuvumela ukuba ungabandakanyi ukulimala kwe-craniocerebral yemvelo engathí sina.
Ucwaningo lubandakanya izinyathelo ezilandelayo eziyinhloko:
I-Radiography. Ivumela ukuveza ukuphazamiseka noma ukwehlukana kwamathambo. Uhlolo luzophetha ngokuthi kungenzeka yini ukuhlukaniswa noma ukwehlukana kwama-vertebrae entanyeni.
Electroencephalography. Ucwaningo lwe-cortex ye-cerebral, enikeza umbono wezingxabano ezincane noma ukungasebenzi kahle emsebenzini.
Uma isiguli sinomthelela omkhulu, udokotela uzothumela ukuhlolwa okuningiliziwe.
Ngeke kube khona umbuzo wokulwa nokuzimela ngokumelene nesifo. Ukubiza "usizo lokuqala" kuyadingeka. Kumele kucatshangwe ukuthi udokotela kuphela ongakwazi ukuxilonga, uphenye ngokucophelela izici zezimo ezinjengokungqubuzana, izimpawu. Futhi ukwelashwa kuzoxhomeke ngqo emfanekisweni wesitholampilo.
Njengomthetho, izenzo zodokotela zihlanganisa izinyathelo ezifana nalezi:
Ukwamukela izihambi (nganoma yisiphi isisindo sokucindezeleka) ngokuqokwa kokuphumula kombhede kuphela.
Ukuxhumana kwemithi ehlose ukubuyisela ukusebenza okujwayelekile. Kusho ukuvumela ukuba ususe ubuhlungu, ukukhulula ukuleleka, isizungu. Njengomthetho, izidakamizwa ezinqunyiwe zinomphumela wokuguqula.
Ngokuhambisana nokwelashwa okuyinhloko, ukwelashwa okuphawulekayo kunqunywe. Yandisa umzimba. Lokhu kusiza ukubuyiswa kwemithambo yegazi namaseli.
Kubalulekile ukunamathela ezincomeni zikadokotela ekudleni.
Umhlukumezi, owabhekana nokuncintisana, engozini yokuthola izinkinga ezihlukahlukene. Lokhu kungaba yinkinga ye-post-traumatic noma isifo esibi kakhulu. Isibonelo - isithuthwane.
Yingakho kubaluleke kakhulu ukungazibandakanyi nemithi yokwelapha, kodwa ukuxhumana nodokotela wezinzwa ukuze uthole usizo olufanele. Kunconywa ukuthi uhambe kuzo zonke izidingo ezibekiwe. Lokhu kuzovumela udokotela ukuba anikeze ukwelashwa okuphumelelayo.
Ngeshwa, abantu abangu-100% abaqinisekisiwe ngokulimala. Kodwa uma sithinta ngezizathu eziyinhloko, okuvame ukudala ukuhlukunyezwa kwe-craniocerebral, khona-ke singakwazi ukuhlukanisa imithetho embalwa elula.
Ukuvikela ikhanda ngesigqoko, uma kudingekile (ihockey, i-roller skating, ibhayisikili, ibhokisi);
Ukusebenzisa amabhande esikhwameni emotweni;
Ukugcina indawo ephephile ekhaya labo (ngaphandle kokuhlaselwa ifenisha, sula uketshezi oluchitheka phansi, ngokukhululekile "ulayishe" iminyango ephakathi kwamakamelo).
Ulwazi lunamandla amakhulu. Lolu lwazi luzosisiza ukuba sibone kalula izimpawu zokuncintisana kubantu abadala. Futhi, okungabalulekile, ungalahleki, ungesabi, kodwa wenze kahle futhi ufunde kahle. Ngakho-ke, uzosula isimo sesisulu.
Izilinganiso ezinyaweni zezinyawo kanye nezindlela zokwelapha zalesi sifo
Izifo ze-Addison: Izimbangela, Izimpawu Nezokwelapha
I-Trichomoniasis. Izimpawu Nezokwelapha
Kungani kukhona izinhlungu ekugqibeleni?
Iyini i-polyiodontics kubantu? Polyiodontia kubantu
Susa imivimbo yesicabucabu emilenzeni
1965: yini isilwane kungenxa ikhalenda empumalanga?
Umhlaba Ihhotela 3 * (Vietnam): isithombe kanye nencazelo yehhotela
Luka: izici ( "I-Lower Ngokujula"). Gorky
Ukukhubazeka olungenzeka ukuphrinta Laser Printers
UPetrenko Aleksandr - Biography nemisebenzi
Emuva ngo-Action: Ford Expedition
Nha Trang International Airport: indawo, isevisi umyalezo
Classic borscht iresiphi: izimfihlo umndeni. Vegetable isobho nge ubhontshisi